3 NZIRA DZEKUNYATSO PUKUTA HARD DHIRAIVHU PAWINDOWS 10 PC - SPONSORED
Vanhu vazhinji havazive kuti kana vadzima mafaera, havana kuenda . Kuti uchengetedze nguva, komputa yako haina kunyora mafaira. Pane kudaro, inozvinyora senzvimbo inowanikwa yekushandisa. Kunze kwekunge iwe wawedzera data idzva rinozadza nzvimbo idzi, zviri nyore zvakakwana kuti utore chero chinhu chawaifunga kuti chakabviswa.
Zviri Mukati ratidza 1 Usakanganwa Kudzoka Kumusoro Kutanga piri Maitiro 1: Dzorerazve PC yako 3 Maitiro 2: Shandisa Eraser Software kujekesa Dhiraivha 4 Maitiro 3: Yakaderera Tech Kunyora 5 Pane Pane Dzimwe Dzimwe Sarudzo?
Izvo zvinonetsa zvakakwana kune vazhinji vashandisi. Asi kana iwe uri kutengesa kana kupa komputa yako yekare, zvinoita kuti zvinhu zvive nenjodzi. Ndicho chikonzero ichi chinyorwa chinofukidza nzira nhatu dzakanakisa dzaunogona kupukuta yako Windows 10 hard drive. Paunopedza kutevera nhanho idzi, hapana munhu anozokwanisa kuwana chero ako marongero, maapplication, mafaera, kana chero imwe dhata kuburikidza neyako yekare dhiraivha.
Usakanganwa Kudzoka Kumusoro Kutanga
Yako yekare data ichiri kukosha kwauri. Iwe haudi kuti iwire mumawoko asiri iwo. Ita kuti zvive nyore pauri uye shandisa gore software zvishandiso senge Microsoft OneDrive kana Google Drive.
Ive neshuwa yekushandisa yakavimbika VPN yekudzivirira ma cybercriminals kubva mukuwana yako data ichiri mukufamba. NordVPN sarudzo yakavimbika. Izvozvowo zvinoenda kana iwe uchitsvaga yako data kune yako nyowani kifaa. Iwe uchazoda kushandisa VPN kuti uichengetedze panguva ino maitiro futi.
Tora nguva shoma kuti uongorore data rako uye backup izvo zvakakosha. Uye chete ipapo wobva wawedzera kune yako Deleting runyorwa.
Maitiro 1: Dzorerazve PC yako
Uchishandisa iyo Windows 10 reinstall operating system ficha, unogona kubvisa zvese pane rako hard drive.
msdn bugcheck vhidhiyo_scheduler_internal_error
Dhinda Khibhodi yekudimbudzira Windows + Ini kuvhura Zvirongwa wobva wadzvanya Kwidziridzo neKuchengetedza.
Kuruboshwe-kurudyi sarudza Kudzorera wobva wadzvanya bhatani Rekutangisa pasi Reset iyi PC.
Zvino sarudza sarudzo Bvisa Zvese. Inobvisa ako ese mafaera, maapplication magadziriso, uye inotanga nekumisikidza yakachena Windows 10.
Sarudza Bvisa Mafaira uye Chenesa Iyo Dhiraivha. Zvinotora imwe nguva, asi iyi sarudzo yakachengeteka yekutengesa kana kupa yako PC.
miseve miviri yebhuruu pazvifananidzo
Maitiro 2: Shandisa Eraser Software kujekesa Dhiraivha
Mune zvimwe zviitiko, ungangoda kudzima zvirimo mune hard drive kana USB drive. Sarudzo senge Eraser bvumidza iwe kuti uzvinyorore nekuzadza neakasarudzika dhata. Zvinoreva kuti hapana munhu anogona kuitora achishandisa zvimwe zvishandiso zve software.
Zviri nyore kuita. Dhawunirodha software uye sarudza iyo mota yaunoda kudzima. Iwe une dzimwe sarudzo, zvakare, kusanganisira:
Zvese kudzima: zvinodzima zvachose mafaera ese aripo kuti aite kuti awanikwezve.
Pukuta data rakabviswa pasina kukanganisa mafaera aripo.
Kugadzira mabhatani anotyaira aunogona kushandisa kana hard drive risingashande.
Pukuta ekunze ekutyaira, anosanganisira USB, SD makadhi, akaomarara anotyaira, uye mamwe ekuchengetedza midhiya.
Maitiro 3: Yakaderera Tech Kunyora
Vanhu vanonyanya kunetsekana nezvekuona kudzima kwakazara vanowanzo sanganisa nzira iyi neimwe yesarudzo dziri pamusoro. Iwe unogona kugadzira boka rezvinhu zvisina basa munzvimbo yaro. Iyo yakapusa iri kushandisa yako yakavakirwa-mukati webcam webcam yekurekodha iyo nhema mufananidzo kune yakanyanya kugona seyako hard drive inogona kubata.
Izvo zvainoita kunyora pamusoro pese dhata pane dhiraivha. Mushure mekuzvidzokorora kanokwana katatu, unogona kuve nechokwadi chekuti rese rako rekare data raenda zvechokwadi.
Kunyange vazhinji vachiwanzoshandisa kutengesa mafoni, pfungwa imwechete inoshanda kune Windows 10 PC. Ramba uchifunga kuti zvinotora nguva kuita. Asi zvakakosha kune avo vari kunetseka nezvekuchengetedza kwavo data.
Pane Pane Dzimwe Dzimwe Sarudzo?
Sarudzo yako yekupedzisira iri kuparadza dhiraivha mumuviri. Asi iwe haugone kuitema uye kutarisira kuti izoshanda. Tevedza nhanho idzi:
windows chitoro chekuisa bhatani rakachekerwa kunze
Shandisa screwdriver kuti ubvise zvese screws kubva mune iyi kesi.
Bvisa ndiro uye misoro kunze kweyakavharirwa uye shandisa sando kupwanya ndiro. Wobva warova izvo zvasara zvikamu.
Mhanya magineti kuyambuka zvidimbu zvakapwanyika kusvika demagnetize dhiraivha .
Paradzanisa izvo zvinhu uye wozvirasa mumatare akasiyana marara.
Sezvaunogona kutaura, iri nzira yakaoma uye haina kudikanwa kune wepakati mushandisi.
Nguva Dzose Pukuta Yako Hard Dhiraivha
Izvo hazvina basa kuti urikupa komputa yako kushamwari yako yepamwoyo kana kuitengesa kumutorwa. Nekuchengetedza kwako, iwe unofanirwa kugara uchipukuta yako hard drive.
Iwe hauzomboziva zvinogona kuitika kana chishandiso chikawira mumaoko asiri iwo kana mubiridzi mumwe munhu akachiwana. Tevedza aya matipi kuti uve nechokwadi chekuti yako yakadzimwa data yaenda kamwe uye zvachose.
Iyo A kune Z Kutungamira kune Dhirairi Dhirairi paWindows 10, 8.1 uye 7
Maitiro ekugadzirisa BitLocker drive encryption pa Windows 10
Idzo nzira dzepamutemo dzekunonoka Windows 10 kugadzirisa kumisikidza (Kumba Kodhi)
5 Zvikonzero Zvako Windows 10 Komputa iri Kumhanya Zvishoma, maitiro ekuzvigadzirisa
isingakwanise kubatanidza kune windows kugadzirisa
hatina kukwanisa kuumba chikamu chitsva kana kutsvaga
windows 10 gadziridza chrome isiri kushanda
bvisa google yekutsvaga bar Android
Microsoft Edge haishande mushure mekugadziriswa kwevagadziri